Izipikili zezipikili zezinja: umhlahlandlela ophelele wokuthenga eyodwa | Izinja Umhlaba
Cabanga ukuthi unenja. Kube nawe isikhathi eside futhi ujwayele ukuzwa umsindo omncane lapho uhamba phansi, ikakhulu uma kuyiparquet. Kepha kuthiwani uma sikutshela ukuthi ukushiya izinzipho zenja yakho zinde kungathinta impilo yakhe? Kunezizathu eziningi zokuba ne- izinzipho zezinja futhi ulisebenzise njalo.
Futhi ngukuthi, phakathi kwezinkinga eziningi izinja ezingabhekana nazo, ukuthi izinzipho zazo zikhula kakhulu kangangokuba zivimba ukuthi zingahambi kahle, ezilimaza ngazo imilenze namapayipi, nokuthi, ngokuhamba kwesikhathi, zingaba negciwane elibi umthelela. Ngabe ufuna ukwazi okwengeziwe ngezipikili zezipikili zezinja futhi wazi ukuthi yikuphi okuhle kunja yakho?
1 Izipikili ezingcono kakhulu zezinja
2 Izinhlobo zezipikili zezinja
2.1 Ngenja encane
2.2 Ngenja enkulu
3 Ungayisebenzisa kanjani i-nail clipper
4 Ngabe kufanele ngifayilishe izinzipho zenja ngemuva kokusebenzisa isinqamuli sezipikili?
5 Kufanele sizigunde nini izinzipho zenja yethu?
6 Ungasithenga kuphi isicucu sezinzipho sezinja
Izipikili ezingcono kakhulu zezinja
I-Candile Nail Clippers ye ...
Izinqamuli zezinzipho zenja kanye...
I-Thunderpaws Naipp Clippers ...
Izinhlobo zezipikili zezinja
Into yokuqala okufanele uyazi ukuthi Emakethe ngeke uthole uhlobo olulodwa kuphela lwe-nail clipper yezinja, kepha kunezinhlobo eziningana. Ngisho odokotela bezilwane banenqwaba emitholampilo yabo ukuzivumelanisa nohlobo lwenja oludinga "ukuzicwala nokuzilungiselela."
Kepha kukhona yini? Sikutshela ngabo:
Zihluke kwabanye ngosayizi wazo ikakhulukazi. Lezi zincane, zombili ngobude futhi nasendaweni evulekile lapho isiklipikili sezipikili kufanele sifake khona izipikili.
Babukeka okuqinile nokuqinile, futhi akuyona into encane ngoba izipikili zezinja ezinkulu zinzima impela futhi uma ungatholi ithuluzi elihle unenkinga yokuthi awukwazi ukuzisika (noma ukuthatha isikhathi eside futhi kuyinqubo ebuhlungu kakhulu).
Yizo ezisetshenziswa odokotela bezilwane. Lezi zenziwe ngekhwalithi ephezulu futhi zisikwa kahle impela futhi ziyashesha, ngakho-ke ngemizuzwana noma imizuzu bashiya izinzipho zicutshiwe ngaphandle kokucindezela isilwane.
I-Pet Nail Clippers...
Izipikili zezipikili zezinja zikagesi afana namafayili kagesi, njengoba bephethe ukupholisha izipikili ngendlela yokuthi zifinyeze, kepha ngaphandle kokuzisika ngasikhathi sinye. Inkinga ngalokhu ukuthi kungathatha isikhathi eside ukuqeda kepha ekubuyiseni akudingeki ukuthi ufake ngemuva kwalokho.
I-Artero Nail Clippers ...
Zenziwe njengezimpintshisi futhi zibhekwa ngabaningi njengabachwepheshe. Zisebenza kakhulu futhi ukwakheka kwayo kusho ukuthi awudingi ukusebenzisa amandla amaningi ukusika izinzipho zezinja.
I-Sailosun Skin Care...
Izipikili zezipikili ezinokukhanya zinayo inzuzo abazikhanyisela yona. Ngale ndlela uthola ukuphepha okwengeziwe ngoba kulula ukubona ulayini we-venal ukuze ungayinqumi (futhi wenze umonakalo omkhulu).
Ungayisebenzisa kanjani i-nail clipper
Ukwesaba ukusika izinzipho zenja kuyinto ejwayelekile. Awusiye owokuqala noma owokugcina ukwethuka ucabanga ukuthi ungalimaza "umngane wakho omkhulu". Kepha uma wazi ukuthi ungakwenza kanjani akufanele ube nenkinga ngakho. Lapha sikunikeza izinyathelo.
Iya nenja yakho endaweni ekhanyiswe kahle kakhulu. Uma futhi une-clip clipper yezinja ezinokukhanya okungcono kakhulu, ngoba uzogxila ephuzwini elithile lapho ufuna ukuthi likhanye khona.
Khulula inja yakho, futhi ngendlela nawe, ukuze nobabili nithathe lo msebenzi njengesikhathi sokuba ndawonye, ​​ngaphandle kokuxineka noma ukwethuka. Uma usukwenzile, thatha enye yezidladla zenja yakho bese ucindezela kancane kuphedi yayo ukuze kuphume izinzipho.
Ngemuva kwalokho thatha isipikili se-nail kahle, ngokukhululeka (uzozilimaza) noma ukhululeke (ungaphunyuka lapho usika isipikili). Uma wesaba ukumzwisa ubuhlungu, ungasika kuphela izeluleko zezipikili, futhi njengoba uthola ukuzethemba, unciphise lezo zipikili kakhulu (njalo uqaphele ukuthi ungasondeli kakhulu emthanjeni). Khumbula ukusika ngokulandelana, hhayi ngqo.
Kamuva, ngefayela ungabhebhethekisa ukusikeka kwezipikili. Ekugcineni, mnike umvuzo ukuze aqonde ukuthi uma eziphatha kahle, uthola umvuzo.
Ngabe kufanele ngifayilishe izinzipho zenja ngemuva kokusebenzisa isinqamuli sezipikili?
Lapho ususike izinzipho zenja yakho, zingaba zinhle ngemiphetho ebukhali kunezinye. Inkinga ukuthi uma inja izinwaya, noma isebenzisa izidladla zayo, ingenza umonakalo omkhulu osanda kusikwa. Ukugwema lokhu, kunconywa kakhulu ukuthi, ngemuva kokusikwa, thatha imizuzu embalwa ukuwafaka.
Vele, akuzona zonke izinja ezibekezelela ifayili, ezinye, njengabantu, zibakhathaza kakhulu futhi zibenze bazizwe kabi, ngakho-ke kuzofanele uvivinye ukuze ubone ukuthi inja yakho iyalamukela. Uma kungenjalo, zama ukuchitha isikhathi esithe xaxa ukusika ukuze kuzenze zibe bushelelezi ngangokunokwenzeka. Inja izokunakekela ukuwafaka ngokuhamba kwesikhathi lapho umkhiphela ngaphandle kokuhambahamba (ikakhulukazi uma umhambisa emasimini, ematsheni, njll.).
Kufanele sizigunde nini izinzipho zenja yethu?
Sebenzisa i-nail clipper yezinja kufanele kube ngumsebenzi inja okufanele uyijwayele, uma kungenzeka, kusukela ebuntwaneni. Ngale ndlela uzoba nenkinga encane yokuthi ahambe noma ethuke ngenkathi uzama ukusika izinzipho zakhe.
Futhi, kufanele ukwenze njalo emavikini amane, okungukuthi, kanye ngenyanga kufanele usike izinzipho zenja yakho. Ngeke kuthathe isikhathi eside futhi akuyona into ebalimazayo noma (ngaphandle kokuthi usike umthambo wayo ngephutha bese iqala ukopha, yebo). Kukhona izinja okuthi, kungaba ngoba zihlala ngaphandle (emaphalangeni noma ezifanayo) noma ngoba zivivinya kakhulu ensimini, ezigqoka izinzipho zazo ngokwazo, kepha noma kunjalo, kuyalulekwa ukuzihlola njalo ngenyanga, nokusikeka okuncane njalo Izinyanga ezi--1 azilimazi.
Ungasithenga kuphi isicucu sezinzipho sezinja
Manje njengoba usuyazi ukubaluleka kwezinsimbi zezipikili zezinja, uma unesilwane esinezinyawo ezine sekuyisikhathi sokusithola, ikakhulukazi uma uhlala ezindlini ngoba kuzobe kungazigqoki izinzipho njengoba kufanele. Futhi ungayithenga kuphi? Qaphela.
kiwiko: UKiwoko uyi isitolo esigxile emikhiqizweni yezilwane zasekhaya, hhayi izinja kuphela, kepha zonke izinhlobo zezilwane ezifuywayo. Ngakho-ke lapha uzokwazi ukuthola ukukhethwa okulinganiselwe kwama-nail clippers ezinja.
empambana: ICarrefour ayinakho ukukhetha okukhulu kwezinja, kepha ku-inthanethi ungathola eminye imikhiqizo, kungaba ngqo noma ngabantu besithathu, lapho ukunweba khona amamodeli nezinhlobo zezipikili zezinja.
UMercadona: IMercadona, kuze kube manje, ayisona esinye sezitolo lapho ungathola khona izesekeli ezinkulu zezinja. Kepha kuyiqiniso ukuthi, kwezinye izitolo, banemikhiqizo ethile ejwayelekile yezilwane ezifuywayo.
Amazon: Endabeni ye-Amazon yilapho uzothola eyodwa Ukukhetha okukhulu kakhulu kwezipikili zezipikili zezinja. Ngaphezu kwalokho, banezinhlobo eziningana, futhi inani lamanani abo lihluka kakhulu kulokho okulingana nesabelomali onaso.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Izipikili zezipikili zezinja